विद्यार्थीले चाहेका हरेक कुरामा परामर्श दिन्छौं | Mechikali Daily
विद्यार्थीले चाहेका हरेक कुरामा परामर्श दिन्छौं
Posted By: Mechi Kalion: १३ बैशाख २०७४, बुधबार ११:१०
पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा जानेहरुको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । कतिपय विद्यार्थीहरु कुरै नबुझी विदेशमा पढ्न जाने गरेका छन् । आवश्यक परामर्श नलिइकन विदेश जाँदा कतिपयले दुःख पाएका घटनाहरु पनि धेरै सुन्नमा आउने गरेका छन् । यस्ता समस्या विद्यार्थीहरुले भोग्न नपरोस् भनेर व्यापारिक केन्द्र बुटवलमा धेरै इन्स्टिच्यूटहरुको स्थापना भएका छन् । त्यसमध्ये पुरानो, भरपर्दो र विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न सफल डल्फिन एजुकेशन कन्सल्टेन्सी पनि हो । जहाँ विदेश पढ्न जानेहरुका लागि राम्रो काउन्सिलिङ्ग गरिन्छ ।
केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंँ रहेको डल्फिन एजुकेशन कन्सल्टन्सीले २००३ बाट बुटवलमा सेवा सुचारु गरेको हो । डल्फन किन र के का लागि ? भन्ने बिषयमा मेचीकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकका संवाददाता विन्दु थापाले सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल जोशीसंँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ–सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ः
डल्फिन एजुकेशसन कन्सल्टेन्सी कहिले र किन स्थापना गर्नुभयो ?
डल्फिन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी २००२ मार्च ५ मा काठमाडौँमा स्थापना भएको हो । त्यसपछि बुटवल र यस आसपासका विद्यार्थीहरु पनि विदेशमा पढ्न जानको लागि काठमाडौंमा धाएको देखेपछि यहाँ पनि आवश्यक छ भन्ने लाग्यो र बुटवलमा २००३ मा शाखा विस्तार गरेका हौंँ ।
यस कन्सल्टेन्सीले कुन –कुन मुलुकमा विद्यार्थी पठाउने गर्छ ?
हाल डल्फिन एजुकेसनले अष्टे«लिया, न्यूजिल्याण्ड, यूएसए, यूके, फिलिपिन्सस, क्यानडालगायतका मुलुकमा विद्यार्थीहरु पठाउँदै आएको छ ।
यो कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीको लागि के सुविधा दिँदै आएको छ ?
विद्यार्थीका हरेक समस्याहरु बुझेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । उनीहरुले जान्न चाहेका कुराहरुलाई हामीहरुले सिकाउँदै आएका छाँै । उनीहरुको सुरुदेखिको प्रोसेसमा हामीले सहयोग पु¥याउँदै आएका छौँ । विद्यार्थीहरु धेरै प्रकृतिका हुन्छन्, उनीहरुका समस्याहरु पनि हुने गर्छन् तर त्यसलाई ध्यानमा राख्दै सहयोग पु¥याएका छौँ । यहाँबाट विदेश पढ्ने जानेहरु हरेक विद्यार्थीले २० प्रतिशत छुट पाउने गर्छन् ।
अष्ट्रेलिया पढ्न जान कम्तिमा कति खर्च लाग्ने गर्छ ?
यूनिभर्सिटीमा ब्याचलेर लेवलको लागि ६ महिनाको फिसहित कम्तिमा १४ देखि १५ लाख लाग्ने गर्छ । कुनै कलेजमा ९ देखि १० लाख सम्ममा जान पनि सकिन्छ । कलेजको सुविधा हेरेर खर्च लाग्ने गर्छ । पुरानो कलेजमा बढी र नयाँ कलेजमा केही सस्तो हुन्छ । यो सुरुमा लाग्ने खर्च हो भने बार्षिक फि २० हजार डलरदेखि २२ हजार डलर सम्म लाग्ने गर्दछ ।
विदेशमा पढ्न जानेहरुको तुलना गर्दा कस्ता प्रकृतिका विद्यार्थीहरु बढी आउने गर्छन् ? सरकारी र निजी मध्य कुनबाट बढी छन् ?
धेरैजसो विद्यार्थीहरु ब्याचलर पढ्न जाने आउछन् । त्यसपछि डिप्लोमा गर्न जानेहरु आउने गर्छन् । पछिल्लो समयमा ९ कक्षा सम्म बोर्डिङ पढाउने र त्यसपछि सरकारी विद्यालयमा पढाउने भएकाले दुवैको बराबर आउने गरेका छन् ।
यहाँ कुन –कुन ठाउँका विद्यर्थीहरु आउने गर्छन् ?
नवलपरासी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची , पाल्पा, रुपन्देहीबाट आउने गर्छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रुपन्देहीका रहेका छन् ।
इन्स्टिच्यूट सञ्चालन गर्दा गाह्रो हुँदैन ?
हरेक क्षेत्रमा गाह्रो भन्ने भइहाल्छ । तर, हामीले त्यसलाई सहज तरिकाले लिँदै मेहनत गर्दै अगााडि बढ्नुपर्छ । यसमा पनि धेरै चुनौतीहरु छन् । त्यस्ता चुनौती र सास्यासँंग जुध्दै अहिलेसम्म यहाँ आएका छाँै । विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्न सकेका छौँ ।
१४ बर्ष पुरानो डल्फिनले विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाईमा सेवा दिँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, डल्फिन ब्रिटिस काउन्सिलको लागि आयलटेस रजिष्ट्रेसन सेन्ट्रर पनि छ । विद्यार्थी र अभिभावक कुनै कन्सल्टेन्सीमा जानुपूर्व त्यो कन्सलटेन्सी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त छ कि छैन भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । स्वीकृत नपाएका कन्सलटेन्सीबाट विदेश जाँदा समस्याहरु आउने गर्छन् । त्यसैले स्वीकृत हो कि होइन बुझ्न जरुरी छ ।
डल्फिन एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, बुटवल